ဘေးအိမျက အကိတျမလေး – My Blog
သူ့ နာမညျက နှယျတဲ့ သူနဲ့ ကိုယျက သိပျမကှာလှဘူး သူက ၈တနျး ကိုယျက ၁၀ အခြိနျလောကျကပေါ့ နှယျတို့ အိမျက ကိုယျ့အိမျ ရဲ့ ခွရေငျးဘကျမှာ ကိုယျ့အိမျက သူတို့ခေါငျးရငျးမှာ ပေါ့ နှယျတို့ အိမျနောကျကြောမှာတော့ အိမျမရှိတော့ ခွံ အလှတျတဈခွံပဲရှိ တော့တယျ အလှတျခွံပွီးရငျ မွဈ ကိုယျ့ခွံရဲ့ နောကျကြောဘကျမှာက လူမနတေဲ့ အိမျတဈလုံးရှိသေးတယျ ပွီးရငျတော့ မွဈပဲပေါ့ နှယျနဲ့ကိုယျက ကြောငျးသှားဖျော ကြောငျးသှားဖကျတှလေေ အိမျကလညျးခွရေငျးခေါငျးဆိုတော့ တူတူပဲသှားဖဈကတြာပေါ့ ကိုယျ တှရှောမှာ မူတနျးလောကျထိပဲကြောငျးတှကေရှိတာလေ အလယျတနျးတကျရတော့မယျဆို အခွားရှာမှာရှိတဲ့ ထခှဲကြောငျးတှကေို သှားတကျရတာ သူအလယျတနျးစတကျခါစက ကိုယျက စီနီယာဆိုတော့ သူ့အိမျကလညျး ကိုယျ့နဲ့ထညျ့ပွီးလှတျတယျလေ ကိုယျ့နဲ့ အတူတူသှားဖို့ ပွနျလာရငျ စောငျ့ဖို့ မှာထားပွောထားကတြာပေါ့ အခြိနျတုံးက ငယျကလညျးငယျသေးကတြော့ ဒီလိုပဲ ကြောငျးသှား လိုကျ ပွနျလာလိုကျနဲ့ပဲ ဘာစိတျမှ မရှိသေးတော့ ဖငျပုတျခေါငျးပုတျ နခေဲ့ကတြာပေါ့ ဘာမှလဲမဖဈဘူးလေ သူလဲမဖဈဘူး ကိုယျလဲ မဖဈဘူးအေးဆေးတှပေဲ ဒါပမေယျ့ အခုနှဈ ကိုယျကဆယျတနျး သူက၈တနျး မနှဈကထိ ဘာမှမဖဈကပြမေယျ့ အခုကတြော့ သူက တျောတျောဖှံဖွိုးလာတာ နို့အုံကွီးတှဆေိုတာကလညျး တျောတျောကိုကွီးလာတာ လကျတဈဆုတျစာလောကျရှိတယျ နှယျ့တငျတှေ ဆိုတာကလညျးလေ တငျးပွီး ကွီးလာသလားမပွောနဲ့ အနောကျကိုကော့ခြိတျနတောပဲ ဒါပမေယျ့သူကတော့ ခန်ဓာကိုယျကသာ အပြိုကွီးဖားဖားဖွဈလာတာ စိတျကတော့ ကလေးစိတျပဲရှိသေးတာ ကိုယျကတော့ ဘယျဟုတျမလဲ ခန်ဓာလညျးကွီးလာသလို ညီ တျောမောငျကလညျး ကွီးလိုကျလာတာ ဆိုးတာက ထနျပါထနျလာတာ တဈပတျတဈခါလောကျထုဖွဈနတေယျ
အလိုနဲ့ကြောငျးဖှငျ့တော့ မိုးတှငျးအခါဆိုတော့ ရှာလမျးတှကေဆိုးတာပေါ့ နှားတှသှေား လှညျးတမေောငျးဆိုတော့ အတော့ နှယျက ကြောငျးသှားရငျ ထမီအစိမျးကို အိမျကတော့ မဝတျသှားတာမြားတယျ လမျးကောငျးပွီဆိုမှ ထုတျဝတျတာ အိမျကနဆေို စပနျ့ ဘောငျးဘီလေးဝတျဝတျပွီးသှားနကြေ ကြောငျးသှားရငျသူကရှကေ့ ကိုယျကနောကျက (နောကျကလိုကျဆို သူ့ဖငျကိုကွညျ့ခငျြတာ ကိုးဗြ) အတော့ သူစပနျ့ဘောငျးတှကေ လမျးလြောကျတိုငျးတငျးခံနတေယျ တငျးသှားတိုငျးတငျးသှားတိုငျး အတှငျးခံရာတှကေထငျ နတောပဲ အခြိနျဆို ကိုလီးကတောငျလာပွီ မနညျးနညျးစှဲနှိမျ့ထားရတယျ နှိမျ့တော့လဲ ပိုစိုးတာပေါ့ အခြိနျကမသေ အကွညျ့တဘော တလှေဲပွီး စိတျကိုလြော့ရတယျ ဒါမယျ့ အိမျပွနျရောကျခြိနျဆိုရငျတော့ နှယျ့ဖငျ့ကို ပွနျမွငျယောငျကာမှနျးမှနျးပွီးထုတော့ တာပဲ ကြောငျးဖှငျ့ကာမှ နတေို့ငျးနီးပါးကိုထုဖဈနတေော့တာ (နှယျ့ကြေးဇူးတပေေါ့)
အလိုနဲ့ တဈနေ့ ကြောငျးသှားခြိနျ ညကမိုးရှာထားတော့ လမျးမှာ ဗှကျတဖွေဈနတေယျ အရငျနတှေ့ေ လိုပဲ နှယျက ဘောငျးဘီလေး ဝတျပွီးထှကျလာတာပေါ့ ကြောငျးသှားတော့မယျဆိုတော့ အလိုနဲ့ လမျးရောကျတော့ နှယျကသူ့ဘောငျးဘီပမှောစိုးလို့နဲ့တူပါတယျ ဘောငျးကို အပျေါကို နညျးနညျးလိပျတငျလိုကျတယျ ကိုယျ့မှာလေ နောကျကနပွေီး ထနျလာလိုကျတာ ပွောမနနေဲ့ ပွေးသာစောငျ့ လိုးလိုကျခငျြတော့တယျ အမှာ ကိုယျ့ကလညျး ပုဆိုးကို မွှောကျထားသလိုနဲ့ ကိုယျ့လီးကိုကိုငျပွီး လုပျငနျးစနမေိတယျ နှယျက ဘောငျးဘီးကို အပျေါနညျးနညျး လိပျတငျထားတော့ ပေါငျတနျလေးကဖှေးဥပွီး စုတျခငျြစရာလေး ပွီးတော့ အနကေ့ သူဝတျလာတဲ့ ပငျတီကပနျးရောငျလေး ဘောငျးဘီလိပျတော့ အတှငျးခံလေးပါ ရောလိပျလိုကျတယျ ကြှနျတျော ပိုထနျလို့ကောငျးသှားတာပေါ့ သှားနရေငျး ဇရပျကလေး တဈခုနားရောကျတော့ မိုးကဗွုနျးစားကွီး ခကျြခငျြးထရှာတယျ ရှနေ့ောကျကွညျ့လိုကျတော့ ကိုယျတေ နှဈယောကျတညျး အလိုနဲ့ နှဈယောကျသား ဇရပျခပျသေးသေးလေးထဲအတငျးပွေးဝငျပွီးမိုးခိုလိုကျတယျ အဒီမှာ ကိုယျ့အကွံစ ထုတျပွီလေ နှယျ့ကို လိုးဖို့ ဘယျလိုရပါ့မလဲစဉျးနခြေိနျ နှယျက ဇရပျကိုမှီထားရငျးက ဇရပျပျေါတကျထိုငျလိုကျတယျ ကိုယျလညျး အကွံပေါကျပွီး နှယျ့ဘကျကို မကျြနှာလှညျ့က ဇရပျတိုငျကိုမှီရငျး ဒူးထောငျပွီးထိုငျလိုကျတယျ ပွီးအောကျစကိုလှတျခငျြသယောငျ ဆောငျလိုကျတာပေါ့ ပွီးတော့ ကိုယျ့လီးထိပျကိုလညျး အတှငျးခံအပွငျနညျးနညျးထုတျးပေးထားလိုကျတယျ လီးကလညျးတောငျနေ တာဆိုတော့ ရှညျပွီး အပွငျကိုထှကျနတောပေါ့ ပထမတော့ နှယျက အပွငျဘကျကိုကွညျ့နတော ကိုယျကပဲ စကားစပွောတယျ
“မိုးကလညျးကှာ ခကျြခငျြးကွီး ဘယျလိုဖဈလို့ထရှာပါလိမျ့ ကြောငျးရောကျရှာရငျတျောသေးတယျ ဘာညာပေါ့ ‘ပွောလိုကျတော့ နှယျက ကိုယျ့ဘကျကိုလှညျ့ကွညျ့ပွီးစကားပွောခါနီးမှာ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ ကိုယျ့လီးကိုကွညျ့ပွီး ခနမသှေ့ားတယျ ကိုယျက လညျး မမွငျခငျြယောငျဆောငျပွီး လီးကိုခနခနထပျတောငျပွနျလိုကျတယျ ၃မိနဈလောကျ သူစိုကျကွညျ့ပွီးတော့မှာ သတိပွနျဝငျ လာတယျတူတယျ
“ဟုတျတယျနျော’တဲ့ အခြိနျကိုယျသူ့ကိုကွညျ့လိုကျတော့ တံတှေးတှမွေိုခနြတေယျ နှုတျခမျးတှကေို လြှာနဲ့သပျနတေယျ သူလညျး ကာမအရသာကို ခံစားခငျြနပွေီလို့တှေးလိုကျတယျ ကိုယျကလညျးအရငျက မလုပျဘူးတော့ ဘယျကစလုပျရမှနျးမသိဘူးလေ အ တော့ စဉျးစားရကကျြတာပေါ့ နှယျ့ကို လိုးခငျြတာက တဈမြိုး ဘယျကစရမှနျးမသိတာက တဈမြိုး မထူးပါဘူးဆိုပွီး နှယျ့ရှတေ့ငျပဲ မိုးကလညျး အေးလိုကျတာ သေးတောငျပေါကျခငျြလာတယျဆိုပွီး နှယျ့ဘကျခွမျးကိုသှားပွီး နှယျ့ကိုကြျောပွီး တောငျနတေဲ့လီးကို ဆှဲထုတျလိုကျတယျ လီးကတောငျနတေော့ ၆လကျမလောကျရှညျနတေယျ အလုံးကလညျး လကျစုတျစာလောကျကွီးတော့ ပုဆိုး ကိုလှနျတငျထားလိုကျတယျ နှယျမမွငျမွငျအောငျလို့ ထနျနတေဲ့အခြိနျဆိုတော့ လှတျခလြိုကျတာ ကောငျးမှ ကောငျးဗြာ အဒါကို နှယျက အနောကျကနေ ခိုးကွညျ့နတေယျ ကိုယျလီးကွီးကို ကွညျ့ပွီး တံတှေ့းတမွေိုခနြတေယျ ကိုယျကလညျးမသိခငျြယောငျ ဆောငျပွီး လီးကို တဈခကျြနှဈခကျြလောကျ ဂှငျးထုပဈလိုကျသေးတယျ (ဟနျပွလေးပေါ့) ပွီးတော့ လီးကို အတှငျးခံထဲ ပွနျထညျ့ ပွီးနောကျအလှညျ့မှာ နှယျကသူ့လကျလေးကို သူ့ပေါငျကွားလေးထဲထညျ့ပွီး ပှတျနတော ကိုယျ့မွငျလိုကျတယျ ကိုယျ့လှညျ့လိုကျ တော့ သူခကျြခငျြးပဲ ရပျသှားတယျပွီးတော့
“မိုးတော့ နညျးနညျး သညျးသှားပွီနျော ခနနဆေိုငါတို့သှားလို့ရတော့မယျ’ ဆိုပွီး အာရုံပွောငျးလိုကျတယျ ကိုယျကလညျး ‘အငျး ‘ပေါ့ အနောကျကနေ ဖောလိုလေးလိုကျဖွလေိုကျတယျ ကိုယျသိလိုကျတာက နှယျလညျး အပြိုပေါကျလေး ဖဈလာပွီ ကာမ အရသာကိုခံစားတကျနပွေီ အလိုးခံခငျြနပွေီဆိုတာသိလိုကျတာ ဘယျသူမှ မလိုးခငျ ကိုယျအရငျလိုးရအောငျ ကွိုးစားမယျဆို ပွီးဆုံးဖွတျလိုကျတယျ ကိုယျတှေးနတေုံးမှာပဲနှယျက ‘မိုးတိတျပွီးသှားရအောငျ’ ဆိုပွီး ရှကေ့ထထှကျသှားတယျ ကိုယျကနောကျက လိုကျရငျး ကွညျ့မိတော့ မှ နှယျ့ဘောငျးဘီမှာ စောကျရညျလေးတှေ ခြှဲနတေယျ ခုနက ကိုယျ့လီးကိုကွညျ့ရငျးခံခငျြလာတာထငျပါ တယျ လူပြိုလီးမမွငျဖူးသေးတော့ သူ့ခမြ တျောတျောခံခငျြသှားမှာပဲ မိနျးကလေးဆိုတော့ မပွောရဲလို့သာ
အလိုနဲ့ ကြောငျးပတျရကျရောကျတော့ နှဈယောကျသား အိမျမှာပဲ ဘယျမှ မသှားဖဈဘူ သူ့လညျး သူ့အိမျသူနေ ကိုယျလညျးကိုယျ့ အိမျကိုယျပေါ့ နှဈအိမျလုံးမှာတော့ လူကွီးတကေ ဘယျသူမှ မရှိ အခွားရှာမှာ ဆှမျးကွှေးရှိလို့တဲ့ဆိုပွီးသှားကုနျကတြာ ညနမှေ ပွနျ ရောကျမယျတဲ့ ကိုယျတကေိုက စာလုပျဖို့ဆိုပွီးထားခဲ့ကတြာ အစောပိုငျးတုံးကတော့ အိမျပျေါမှာပေါ့ သူလညျး သူ့အိမျမှာ ခကျြပွုတျနတောနဲ့တူတယျ မမွငျမိဘူး ခနနတေော့ ကိုယျလညျးထနျလာတာနဲ့ နှယျ့ကိုသှားခြောငျးမယျကှာဆိုပွီး အောကျဆငျးလာ တာ သူကလညျး ရခြေိုးမို့နဲ့တူတယျ ထမီရငျခွားလေးနဲ့ သူ့အိမျအနောကျဘကျမှာ သူတို့ရခြေိုးတဲ့နရောက သူတို့အိမျရဲ့ အနောကျ မှာ လုပျထားပေးတာ အိမျရှကေ့နမေမွငျရဘူးပေါ့ ဒါပမေယျ့ အရှဘေ့ကျက ဘာမှမကာထားဘူး ခွံစညျးရိုးလေးတော့ ခွားထားတာ ပေါ့ ဝါးလေး ခပျကြဲကြဲ ရပျပွီးကာထားတာ ဟိုဘကျဒီဘကျကတော့ အပျေါကပဲကြျောကွညျ့ကွညျ့ ထိုငျပွီးပဲကျညွ့ကွညျ့ မွငျနရေ တယျ နှယျရခြေိုးတဲ့နရောကိုရောကျတော့ ဘေးဘီးကွညျ့လိုကျသေးတယျ ကိုယျကခြောငျးနတောဆိုတော့ ကိုယျ့ကိုသူမမွငျလိုကျ ဘူး ကွညျပွီးတော့ သူ အတှငျးခံလေးကို ထမီအောကျကနေ လကျလေးနဲ့လှမျးနှိုကျပွီး ခြှတျခလြိုကျတယျ ပွီးတော့ အရှကေ့ သမံတလငျးပျေါပဈခလြိုကျတယျ ကိုယျအိမျရဲ့ ခွရေငျးမှာက စပါးထညျ့ဖို့ဆောကျထားတာရှိတယျ အဲ့ဒီဘေးကိုသှားရပျလိုကျတယျ အိမျရှဘေ့ကျဘယျသူလာလာကိုယျ့ကိုရုတျတရကျမမွငျရတော့ဘူးပေါ့ ဒါပမေယျ နှယျတို့အိမျကွညျ့ရငျတော့ ကှကျတိပဲပေါ့ ကပျ ရကျပဲကိုး နှယျက ပငျတီလေးကို ပဈခပြွီး မကျြနှာသဈရလေေးတဈခှကျလောကျလောငျးပွီးတော့ သူပိပိလေးကို ကလိနတေယျ အစောပိုငျးတော့ ထမီအပျေါလေးကနပေေါ့ အခြိနျမှာ ကိုယျကလညျး အပီအပွငျကို ထုနပွေီ နှယျ့ကိုကွညျ့ရငျး လီးကလညျးတောငျ နခေကျြ ပိုကွီးလာသလားတောငျမှတျရတယျ တဈခါမှ အခုလိုကွညျ့မကျြမွငျမထုရတာ မှနျးပွီးထုတာထကျတော့ပိုအရသာရှိတာ အမှနျပဲ အလိုနဲ့ နှယျက ထမီအပျေါကနေ ကလိနရေငျးကနေ မနနေိုငျတော့ဘူးနဲ့တူပါတယျ ထမီလေးကို အသာစှဲတငျပွီး လူကထိုငျ ရကျသားကနေ သူ့လကျနဲ့သူ သူ့စောကျပိကို (စောကျဖုတျကို)ပွနျလိုးနတေယျ ပါးစပျကလညျး
“အား…… အားးးးးးး…..အာ…….ကောငျးလိုကျတာ ကိုကွီးရာ အား…….အားးးးးးး………..ကောငျးတာကိုကွီးရာ’ဆိုပွီး ညညျးနေ တယျ ကိုကွီးဆိုတော့ ကိုယျ့ကိုချေါတာပဲ သူကအရငျတညျးက ကိုယျ့ဆို ကိုကွီးပဲချေါနကေကြိုး ကိူယျ့သိလိုကျပွီလေ သူကိုယျ့လီး ကိုမှနျးပွီး ပွနျလိုးရငျး အာသာဖွနေတေယျဆိုတာ သိလိုကျပွီ ကိုယျကလညျး တှေးသာတှေးနတော အောကျကလကျက ထုမွဲ ဖီးက လညျးရှိမှရှိ ရှယျပဲ မိနဈ၁၀မိနဈ လောကျနတေော့ နှယျ ဆနျ့ငငျ့ဆနျ့ငငျ့နဲ့ ပွီးသှားတာထငျတယျ ‘အား…….’ဆိုပွီးအသံထှကျလာ တယျ အခြိနျမှာကိုယျကလညျး အားကုနျထုတျသုံးလိုကျတာပေါ့ အမွနျထုခပြဈလိုကျတော့ ‘ဗဈ… ‘ဆိုပွီး သုတျရတှေပေနျးထှကျ သှားတယျ အခြိနျမှာ ကိုယျကကိုယျလီးကို အောကျငုံကွညျ့နခြေိနျ နှယျက ကိုယျ့ကိုလှမျးမွငျသှားတယျ ကိုယျကလညျး လီးကွီးကိုငျ ရကျသားနဲ့ တနျးလနျးကွီးပေါ့ သူကလညျး သူ့စောကျပကျသူပွနျလိုးနတေဲ့လကျကို နှုတျပွီး ကိုယျ့ကိုလှမျးကွညျ့နတေယျ သူကို ကွညျ့ပွီးမှနျးပွီး ဂှငျးထုနတောမွငျရဲ့သားနဲ့ သူကလှမျးမေးတယျ “ကိုကွီး အမှာ ဘာလုပျနတောလဲ’တဲ့ ကိုယျကလညျးပွနျပွော လိုကျပါတယျ
“အငျး…ရခြေိုးလိုကျအုံး ကိုကွီးလညျးရသှေားဆေးလိုကျအုံးမယျ ဘာလုပျနတေယျ ဆိုတာ ရဆေေးပွီးမှ နှယျ့ရှိလာပွီးပွောပွ မယျ ‘လို့လှမျးပွောလိုကျတယျ အခြိနျမှာ သူက “အာ… ကိုကွီးကလညျး ဘာလာလုပျမှာလညျး အကနေ ခုဖွလေညျးရတာကိုး’နဲ့ ပွောတော့ “ရခြေိုးပါ ကိုကွီးလာခဲ့မယျ သခြောသနျ့ရှငျးရေးလုပျထား ‘လို့ကိုယျကပွနျပွောတော့ သူကလညျ ခံခငျြနတောနဲ့တူပါ တယျ ‘ဟုတျ’ ဆိုပွီးပွနျပွောတယျ အခြိနျကတော့ မနကျ ဆယျနာရီလောကျပဲရှိအုံးမယျ အဒါနဲ့ကိုယျလညျး ရသေခြောဆေးပွီး သနျ့ရှငျးရလေုပျပွီး အမှေးကွိုငျလေးစှတျပွီး နှယျ့အိမျဘကျ သှားဖို့ပွငျလိုကျတယျ နှယျ့အိမျကိုရောကျတော့ နှယျက သနားခါး အ ဖှေးသားလေးနဲ့ တဈဆကျတညျး ညဝတျဂါဝနျအပါးလေးကိုဝတျထားတယျ အောကျခံလညျး ဘာမှ မဝတျထားဘူး ဘရာစီယာရော ပငျတီ(အတှငျးခံဘောငျးဘီ)ရောပဲ ရခြေိုးပွီးကာစဆိုတော့ အသားလေးစိုနတောပဲ ကိုယျလညျး လှကေားကနေ အိမျပျေါရောကျ တော့ ‘လာလေ ကိုကွီး ဘာကိစ်စရှိလို့လဲတဲ့ ‘သိသိကွီးနဲ့မေးတယျ အတော့ကိုကလညျး
“ခုနက ကိစ်စပွောပွမို့လေ ပွီးတော့ လကျတှပေ့ါ တဈခါတညျး လုပျကွညျ့ရအောငျလို့လေ ‘ဆိုတော့ “အာကိုကွီးကလညျး ခုနက ဘာကိစ်စရှိလို့လဲ’ တဲ့ “အငျးပါ ကိုကွီး ပွောပွမယျ လုပျပွမယျ’ ဆိုပွီး သူနားကိုတိုးကာ သူနှုတျကို အပီအပွငျစုတျလိုကျတော့ သညျ အခြိနျမှာသူကလညျး အလိုကျသငျ့လေးပွနျစုတျပေးနတေယျ “ပွှနျ………ပွှနျ…’နဲ့ပေါ့ စစုတျခါစဆိုတော့ အသံတပေါထှကျနေ တယျ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ သူ့လကျကလေးကို ကိုယျ့လီးရှိရာကို အသာပို့ပေးလိုကျတယျ ကိုယျကလညျး သူ့ရဲ့ ဖှံဖွိုးနတေဲ့ နို့အုံတေ ကို ခပြေေးနတေယျ သူကလညျး ကိုယျ့လီးကို ဂှငျးတိုကျပေးနတေယျ လီးတျောတျောတောငျလာတော့ သူက စုတျနတောကိုရပျပွီး ‘ ကိုကွီး နှယျလီးစုတျကွညျ့ခငျြတယျ’ တဲ့ အတော့ ကိုယျလညျးဘယျပွောကောငျးမလဲ အစုတျခံခငျြနတောကွာပွီဆိုတော့ “အငျး နှယျစုတျခငျြစုတျလေ ‘ဆိုပွီး ပုဆိုးကိုခြှတျခပြေးလိုကျ အကွံနဲ့ဆိုတော့ ဘာမှ ဝတျမလာဘူးလေ နှယျက ” ကိုကွီးလီးကွီးက အကွီးကွီးပဲနျော ‘တဲ့ “နှယျမွငျဖူးတာပဲလအေတိုငျးပါပဲ’ လို့ ပွောတော့ “နှယျဘယျတုံးကမွငျဖူးလို့လဲ ‘ “ဟို မိုးရှာတဲ့နကေ ဇရပျ မှာနားတော့ ကိုကွီး သေးပေါကျနတေုံး နှယျ နောကျကနကွေညျ့နတောကိုကွီးသိတာကိုး’ဆိုတော့ “ဟငျ ကိုကွီးသိတယျပေါ့ အဒါ မြား ကိုကွီးကလညျးအတညျးကမပွောဘူး နှယျမှာ တော့ အတညျးက အလိုးခံခငျြလို့ သူလီးကွီးကိုမှနျးပွီး ညတိုငျးအိပျယာတညျး မှာ ကိုယျ့ဟာကိုပွနျလိုးနရေတာ ဟငျ့ အကငျြ့ကိုမကောငျးဘူး’ ပါးစပျကသာပွောနတော လကျကတော့ အမှနျကနျကို ထုပေးနေ တာဗြ ကိုယျကလညျး သူ့နို့အုံတှကေို သခြောကို စုတျနယျ ဖိခပြေေးနတေော့ သူကလညျး အရသာရှိနတော “အမှနျတော့ကိုကွီး လညျး နှယျကိုပဲ မှနျးပွီးထုနရေတာ”
“နှယျလညျး ကိုကွီးအလိုးခံခငျြနတောကွာပေါ့ ‘ ‘အဆိုလညျး အခုလိုးရအောငျလကှော လူကွီးတပွေနျမလာခငျ’ ‘ အငျး ‘တဲ့ဆို တော့ ကြှနျတျောလညျး သူ့ကို စလိုးတော့တာပဲ ” အငျး……….အား…………အား………… အားးး………..နာတယျ ကိုကွီး မွနျမွနျ စောငျ့………..အား………..အားသကုနျသာစောငျ့လိုးကိုကွီးအား……..အား……….အား……..’ ကိုကလညျး လိုးခငျြနတော ကွာပွီ ဆိုတော့ အားရပါးရကို လိုးနတေော့တာပဲ နှဈယောကျစလုံးက လီးနဲ့ စပျပတျနဲ့ အပွငျမှာ လကျတှကေ့ ပထမဆုံးလိုးဖူးတာဆိုတော့ သိပျမကွာလိုကျခနနတေော့ သူလညျး ခါးလေးကော့လားပွီ အငျ့…အငျ….အား…ဆိုပွီးသှားတယျ ကိုယျလညျပွီးးသှားတယျ အလိုနဲ့ပဲ လဈရငျလဈသလိုမကွာ ခန နှယျနဲ့ လိုးဖဈသှားတယျ….
သူ့ နာမည်က နွယ်တဲ့ သူနဲ့ ကိုယ်က သိပ်မကွာလှဘူး သူက ၈တန်း ကိုယ်က ၁၀ အချိန်လောက်ကပေါ့ နွယ်တို့ အိမ်က ကိုယ့်အိမ် ရဲ့ ခြေရင်းဘက်မှာ ကိုယ့်အိမ်က သူတို့ခေါင်းရင်းမှာ ပေါ့ နွယ်တို့ အိမ်နောက်ကျောမှာတော့ အိမ်မရှိတော့ ခြံ အလွတ်တစ်ခြံပဲရှိ တော့တယ် အလွတ်ခြံပြီးရင် မြစ် ကိုယ့်ခြံရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာက လူမနေတဲ့ အိမ်တစ်လုံးရှိသေးတယ် ပြီးရင်တော့ မြစ်ပဲပေါ့ နွယ်နဲ့ကိုယ်က ကျောင်းသွားဖော် ကျောင်းသွားဖက်တွေလေ အိမ်ကလည်းခြေရင်းခေါင်းဆိုတော့ တူတူပဲသွားဖစ်ကျတာပေါ့ ကိုယ် တွေရွာမှာ မူတန်းလောက်ထိပဲကျောင်းတွေကရှိတာလေ အလယ်တန်းတက်ရတော့မယ်ဆို အခြားရွာမှာရှိတဲ့ ထခွဲကျောင်းတွေကို သွားတက်ရတာ သူအလယ်တန်းစတက်ခါစက ကိုယ်က စီနီယာဆိုတော့ သူ့အိမ်ကလည်း ကိုယ့်နဲ့ထည့်ပြီးလွှတ်တယ်လေ ကိုယ့်နဲ့ အတူတူသွားဖို့ ပြန်လာရင် စောင့်ဖို့ မှာထားပြောထားကျတာပေါ့ အချိန်တုံးက ငယ်ကလည်းငယ်သေးကျတော့ ဒီလိုပဲ ကျောင်းသွား လိုက် ပြန်လာလိုက်နဲ့ပဲ ဘာစိတ်မှ မရှိသေးတော့ ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ် နေခဲ့ကျတာပေါ့ ဘာမှလဲမဖစ်ဘူးလေ သူလဲမဖစ်ဘူး ကိုယ်လဲ မဖစ်ဘူးအေးဆေးတွေပဲ ဒါပေမယ့် အခုနှစ် ကိုယ်ကဆယ်တန်း သူက၈တန်း မနှစ်ကထိ ဘာမှမဖစ်ကျပေမယ့် အခုကျတော့ သူက တော်တော်ဖွံဖြိုးလာတာ နို့အုံကြီးတွေဆိုတာကလည်း တော်တော်ကိုကြီးလာတာ လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်ရှိတယ် နွယ့်တင်တွေ ဆိုတာကလည်းလေ တင်းပြီး ကြီးလာသလားမပြောနဲ့ အနောက်ကိုကော့ချိတ်နေတာပဲ ဒါပေမယ့်သူကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကသာ အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်လာတာ စိတ်ကတော့ ကလေးစိတ်ပဲရှိသေးတာ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ခန္ဓာလည်းကြီးလာသလို ညီ တော်မောင်ကလည်း ကြီးလိုက်လာတာ ဆိုးတာက ထန်ပါထန်လာတာ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ထုဖြစ်နေတယ်
အလိုနဲ့ကျောင်းဖွင့်တော့ မိုးတွင်းအခါဆိုတော့ ရွာလမ်းတွေကဆိုးတာပေါ့ နွားတွေသွား လှည်းတေမောင်းဆိုတော့ အတော့ နွယ်က ကျောင်းသွားရင် ထမီအစိမ်းကို အိမ်ကတော့ မဝတ်သွားတာများတယ် လမ်းကောင်းပြီဆိုမှ ထုတ်ဝတ်တာ အိမ်ကနေဆို စပန့် ဘောင်းဘီလေးဝတ်ဝတ်ပြီးသွားနေကျ ကျောင်းသွားရင်သူကရှေ့က ကိုယ်ကနောက်က (နောက်ကလိုက်ဆို သူ့ဖင်ကိုကြည့်ချင်တာ ကိုးဗျ) အတော့ သူစပန့်ဘောင်းတွေက လမ်းလျောက်တိုင်းတင်းခံနေတယ် တင်းသွားတိုင်းတင်းသွားတိုင်း အတွင်းခံရာတွေကထင် နေတာပဲ အချိန်ဆို ကိုလီးကတောင်လာပြီ မနည်းနည်းစွဲနှိမ့်ထားရတယ် နှိမ့်တော့လဲ ပိုစိုးတာပေါ့ အချိန်ကမသေ အကြည့်တေဘာ တေလွဲပြီး စိတ်ကိုလျော့ရတယ် ဒါမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ဆိုရင်တော့ နွယ့်ဖင့်ကို ပြန်မြင်ယောင်ကာမှန်းမှန်းပြီးထုတော့ တာပဲ ကျောင်းဖွင့်ကာမှ နေ့တိုင်းနီးပါးကိုထုဖစ်နေတော့တာ (နွယ့်ကျေးဇူးတေပေါ့)
အလိုနဲ့ တစ်နေ့ ကျောင်းသွားချိန် ညကမိုးရွာထားတော့ လမ်းမှာ ဗွက်တေဖြစ်နေတယ် အရင်နေ့တွေ လိုပဲ နွယ်က ဘောင်းဘီလေး ဝတ်ပြီးထွက်လာတာပေါ့ ကျောင်းသွားတော့မယ်ဆိုတော့ အလိုနဲ့ လမ်းရောက်တော့ နွယ်ကသူ့ဘောင်းဘီပေမှာစိုးလို့နဲ့တူပါတယ် ဘောင်းကို အပေါ်ကို နည်းနည်းလိပ်တင်လိုက်တယ် ကိုယ့်မှာလေ နောက်ကနေပြီး ထန်လာလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ ပြေးသာစောင့် လိုးလိုက်ချင်တော့တယ် အမှာ ကိုယ့်ကလည်း ပုဆိုးကို မြှောက်ထားသလိုနဲ့ ကိုယ့်လီးကိုကိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစနေမိတယ် နွယ်က ဘောင်းဘီးကို အပေါ်နည်းနည်း လိပ်တင်ထားတော့ ပေါင်တန်လေးကဖွေးဥပြီး စုတ်ချင်စရာလေး ပြီးတော့ အနေ့က သူဝတ်လာတဲ့ ပင်တီကပန်းရောင်လေး ဘောင်းဘီလိပ်တော့ အတွင်းခံလေးပါ ရောလိပ်လိုက်တယ် ကျွန်တော် ပိုထန်လို့ကောင်းသွားတာပေါ့ သွားနေရင်း ဇရပ်ကလေး တစ်ခုနားရောက်တော့ မိုးကဗြုန်းစားကြီး ချက်ချင်းထရွာတယ် ရှေ့နောက်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်တေ နှစ်ယောက်တည်း အလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဇရပ်ခပ်သေးသေးလေးထဲအတင်းပြေးဝင်ပြီးမိုးခိုလိုက်တယ် အဒီမှာ ကိုယ့်အကြံစ ထုတ်ပြီလေ နွယ့်ကို လိုးဖို့ ဘယ်လိုရပါ့မလဲစဉ်းနေချိန် နွယ်က ဇရပ်ကိုမှီထားရင်းက ဇရပ်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ် ကိုယ်လည်း အကြံပေါက်ပြီး နွယ့်ဘက်ကို မျက်နှာလှည့်က ဇရပ်တိုင်ကိုမှီရင်း ဒူးထောင်ပြီးထိုင်လိုက်တယ် ပြီးအောက်စကိုလွတ်ချင်သယောင် ဆောင်လိုက်တာပေါ့ ပြီးတော့ ကိုယ့်လီးထိပ်ကိုလည်း အတွင်းခံအပြင်နည်းနည်းထုတ်းပေးထားလိုက်တယ် လီးကလည်းတောင်နေ တာဆိုတော့ ရှည်ပြီး အပြင်ကိုထွက်နေတာပေါ့ ပထမတော့ နွယ်က အပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေတာ ကိုယ်ကပဲ စကားစပြောတယ်
“မိုးကလည်းကွာ ချက်ချင်းကြီး ဘယ်လိုဖစ်လို့ထရွာပါလိမ့် ကျောင်းရောက်ရွာရင်တော်သေးတယ် ဘာညာပေါ့ ‘ပြောလိုက်တော့ နွယ်က ကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးစကားပြောခါနီးမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကိုယ့်လီးကိုကြည့်ပြီး ခနမေ့သွားတယ် ကိုယ်က လည်း မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လီးကိုခနခနထပ်တောင်ပြန်လိုက်တယ် ၃မိနစ်လောက် သူစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှာ သတိပြန်ဝင် လာတယ်တူတယ်
“ဟုတ်တယ်နော်’တဲ့ အချိန်ကိုယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ တံတွေးတွေမြိုချနေတယ် နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနဲ့သပ်နေတယ် သူလည်း ကာမအရသာကို ခံစားချင်နေပြီလို့တွေးလိုက်တယ် ကိုယ်ကလည်းအရင်က မလုပ်ဘူးတော့ ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလေ အ တော့ စဉ်းစားရကျက်တာပေါ့ နွယ့်ကို လိုးချင်တာက တစ်မျိုး ဘယ်ကစရမှန်းမသိတာက တစ်မျိုး မထူးပါဘူးဆိုပြီး နွယ့်ရှေ့တင်ပဲ မိုးကလည်း အေးလိုက်တာ သေးတောင်ပေါက်ချင်လာတယ်ဆိုပြီး နွယ့်ဘက်ခြမ်းကိုသွားပြီး နွယ့်ကိုကျော်ပြီး တောင်နေတဲ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် လီးကတောင်နေတော့ ၆လက်မလောက်ရှည်နေတယ် အလုံးကလည်း လက်စုတ်စာလောက်ကြီးတော့ ပုဆိုး ကိုလှန်တင်ထားလိုက်တယ် နွယ်မမြင်မြင်အောင်လို့ ထန်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ လွှတ်ချလိုက်တာ ကောင်းမှ ကောင်းဗျာ အဒါကို နွယ်က အနောက်ကနေ ခိုးကြည့်နေတယ် ကိုယ်လီးကြီးကို ကြည့်ပြီး တံတွေ့းတေမြိုချနေတယ် ကိုယ်ကလည်းမသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး လီးကို တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ဂွင်းထုပစ်လိုက်သေးတယ် (ဟန်ပြလေးပေါ့) ပြီးတော့ လီးကို အတွင်းခံထဲ ပြန်ထည့် ပြီးနောက်အလှည့်မှာ နွယ်ကသူ့လက်လေးကို သူ့ပေါင်ကြားလေးထဲထည့်ပြီး ပွတ်နေတာ ကိုယ့်မြင်လိုက်တယ် ကိုယ့်လှည့်လိုက် တော့ သူချက်ချင်းပဲ ရပ်သွားတယ်ပြီးတော့
“မိုးတော့ နည်းနည်း သည်းသွားပြီနော် ခနနေဆိုငါတို့သွားလို့ရတော့မယ်’ ဆိုပြီး အာရုံပြောင်းလိုက်တယ် ကိုယ်ကလည်း ‘အင်း ‘ပေါ့ အနောက်ကနေ ဖောလိုလေးလိုက်ဖြေလိုက်တယ် ကိုယ်သိလိုက်တာက နွယ်လည်း အပျိုပေါက်လေး ဖစ်လာပြီ ကာမ အရသာကိုခံစားတက်နေပြီ အလိုးခံချင်နေပြီဆိုတာသိလိုက်တာ ဘယ်သူမှ မလိုးခင် ကိုယ်အရင်လိုးရအောင် ကြိုးစားမယ်ဆို ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကိုယ်တွေးနေတုံးမှာပဲနွယ်က ‘မိုးတိတ်ပြီးသွားရအောင်’ ဆိုပြီး ရှေ့ကထထွက်သွားတယ် ကိုယ်ကနောက်က လိုက်ရင်း ကြည့်မိတော့ မှ နွယ့်ဘောင်းဘီမှာ စောက်ရည်လေးတွေ ချွဲနေတယ် ခုနက ကိုယ့်လီးကိုကြည့်ရင်းခံချင်လာတာထင်ပါ တယ် လူပျိုလီးမမြင်ဖူးသေးတော့ သူ့ခမျ တော်တော်ခံချင်သွားမှာပဲ မိန်းကလေးဆိုတော့ မပြောရဲလို့သာ
အလိုနဲ့ ကျောင်းပတ်ရက်ရောက်တော့ နှစ်ယောက်သား အိမ်မှာပဲ ဘယ်မှ မသွားဖစ်ဘူ သူ့လည်း သူ့အိမ်သူနေ ကိုယ်လည်းကိုယ့် အိမ်ကိုယ်ပေါ့ နှစ်အိမ်လုံးမှာတော့ လူကြီးတေက ဘယ်သူမှ မရှိ အခြားရွာမှာ ဆွမ်းကြွေးရှိလို့တဲ့ဆိုပြီးသွားကုန်ကျတာ ညနေမှ ပြန် ရောက်မယ်တဲ့ ကိုယ်တေကိုက စာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးထားခဲ့ကျတာ အစောပိုင်းတုံးကတော့ အိမ်ပေါ်မှာပေါ့ သူလည်း သူ့အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်နေတာနဲ့တူတယ် မမြင်မိဘူး ခနနေတော့ ကိုယ်လည်းထန်လာတာနဲ့ နွယ့်ကိုသွားချောင်းမယ်ကွာဆိုပြီး အောက်ဆင်းလာ တာ သူကလည်း ရေချိုးမို့နဲ့တူတယ် ထမီရင်ခြားလေးနဲ့ သူ့အိမ်အနောက်ဘက်မှာ သူတို့ရေချိုးတဲ့နေရာက သူတို့အိမ်ရဲ့ အနောက် မှာ လုပ်ထားပေးတာ အိမ်ရှေ့ကနေမမြင်ရဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် အရှေ့ဘက်က ဘာမှမကာထားဘူး ခြံစည်းရိုးလေးတော့ ခြားထားတာ ပေါ့ ဝါးလေး ခပ်ကျဲကျဲ ရပ်ပြီးကာထားတာ ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတော့ အေပ်ါကပဲကျော်ကြည့်ကြည့် ထိုင်ပြီးပဲက်ညြ့ကြည့် မြင်နေရ တယ် နွယ်ရေချိုးတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ ဘေးဘီးကြည့်လိုက်သေးတယ် ကိုယ်ကချောင်းနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုသူမမြင်လိုက် ဘူး ကြည်ပြီးတော့ သူ အတွင်းခံလေးကို ထမီအောက်ကနေ လက်လေးနဲ့လှမ်းနှိုက်ပြီး ချွတ်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ အရှေ့က သမံတလင်းပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ် ကိုယ်အိမ်ရဲ့ ခြေရင်းမှာက စပါးထည့်ဖို့ဆောက်ထားတာရှိတယ် အဲ့ဒီဘေးကိုသွားရပ်လိုက်တယ် အိမ်ရှေ့ဘက်ဘယ်သူလာလာကိုယ့်ကိုရုတ်တရက်မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ ဒါပေမယ် နွယ်တို့အိမ်ကြည့်ရင်တော့ ကွက်တိပဲပေါ့ ကပ် ရက်ပဲကိုး နွယ်က ပင်တီလေးကို ပစ်ချပြီး မျက်နှာသစ်ရေလေးတစ်ခွက်လောက်လောင်းပြီးတော့ သူပိပိလေးကို ကလိနေတယ် အစောပိုင်းတော့ ထမီအပေါ်လေးကနေပေါ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း အပီအပြင်ကို ထုနေပြီ နွယ့်ကိုကြည့်ရင်း လီးကလည်းတောင် နေချက် ပိုကြီးလာသလားတောင်မှတ်ရတယ် တစ်ခါမှ အခုလိုကြည့်မျက်မြင်မထုရတာ မှန်းပြီးထုတာထက်တော့ပိုအရသာရှိတာ အမှန်ပဲ အလိုနဲ့ နွယ်က ထမီအပေါ်ကနေ ကလိနေရင်းကနေ မနေနိုင်တော့ဘူးနဲ့တူပါတယ် ထမီလေးကို အသာစွဲတင်ပြီး လူကထိုင် ရက်သားကနေ သူ့လက်နဲ့သူ သူ့စောက်ပိကို (စောက်ဖုတ်ကို)ပြန်လိုးနေတယ် ပါးစပ်ကလည်း
“အား…… အားးးးးးး…..အာ…….ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရာ အား…….အားးးးးးး………..ကောင်းတာကိုကြီးရာ’ဆိုပြီး ညည်းနေ တယ် ကိုကြီးဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုခေါ်တာပဲ သူကအရင်တည်းက ကိုယ့်ဆို ကိုကြီးပဲခေါ်နေကျကိုး ကိူယ့်သိလိုက်ပြီလေ သူကိုယ့်လီး ကိုမှန်းပြီး ပြန်လိုးရင်း အာသာဖြေနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ ကိုယ်ကလည်း တွေးသာတွေးနေတာ အောက်ကလက်က ထုမြဲ ဖီးက လည်းရှိမှရှိ ရှယ်ပဲ မိနစ်၁၀မိနစ် လောက်နေတော့ နွယ် ဆန့်ငင့်ဆန့်ငင့်နဲ့ ပြီးသွားတာထင်တယ် ‘အား…….’ဆိုပြီးအသံထွက်လာ တယ် အချိန်မှာကိုယ်ကလည်း အားကုန်ထုတ်သုံးလိုက်တာပေါ့ အမြန်ထုချပစ်လိုက်တော့ ‘ဗစ်… ‘ဆိုပြီး သုတ်ရေတွေပန်းထွက် သွားတယ် အချိန်မှာ ကိုယ်ကကိုယ်လီးကို အောက်ငုံကြည့်နေချိန် နွယ်က ကိုယ့်ကိုလှမ်းမြင်သွားတယ် ကိုယ်ကလည်း လီးကြီးကိုင် ရက်သားနဲ့ တန်းလန်းကြီးပေါ့ သူကလည်း သူ့စောက်ပက်သူပြန်လိုးနေတဲ့လက်ကို နှုတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ် သူကို ကြည့်ပြီးမှန်းပြီး ဂွင်းထုနေတာမြင်ရဲ့သားနဲ့ သူကလှမ်းမေးတယ် “ကိုကြီး အမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ’တဲ့ ကိုယ်ကလည်းပြန်ပြော လိုက်ပါတယ်
“အင်း…ရေချိုးလိုက်အုံး ကိုကြီးလည်းရေသွားဆေးလိုက်အုံးမယ် ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ ရေဆေးပြီးမှ နွယ့်ရှိလာပြီးပြောပြ မယ် ‘လို့လှမ်းပြောလိုက်တယ် အချိန်မှာ သူက “အာ… ကိုကြီးကလည်း ဘာလာလုပ်မှာလည်း အကနေ ခုဖြေလည်းရတာကိုး’နဲ့ ပြောတော့ “ရေချိုးပါ ကိုကြီးလာခဲ့မယ် သေချာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထား ‘လို့ကိုယ်ကပြန်ပြောတော့ သူကလည် ခံချင်နေတာနဲ့တူပါ တယ် ‘ဟုတ်’ ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ် အချိန်ကတော့ မနက် ဆယ်နာရီလောက်ပဲရှိအုံးမယ် အဒါနဲ့ကိုယ်လည်း ရေသေချာဆေးပြီး သန့်ရှင်းရေလုပ်ပြီး အမွှေးကြိုင်လေးစွတ်ပြီး နွယ့်အိမ်ဘက် သွားဖို့ပြင်လိုက်တယ် နွယ့်အိမ်ကိုရောက်တော့ နွယ်က သနားခါး အ ဖွေးသားလေးနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ညဝတ်ဂါဝန်အပါးလေးကိုဝတ်ထားတယ် အောက်ခံလည်း ဘာမှ မဝတ်ထားဘူး ဘရာစီယာရော ပင်တီ(အတွင်းခံဘောင်းဘီ)ရောပဲ ရေချိုးပြီးကာစဆိုတော့ အသားလေးစိုနေတာပဲ ကိုယ်လည်း လှေကားကနေ အိမ်ပေါ်ရောက် တော့ ‘လာလေ ကိုကြီး ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတဲ့ ‘သိသိကြီးနဲ့မေးတယ် အတော့ကိုကလည်း
“ခုနက ကိစ္စပြောပြမို့လေ ပြီးတော့ လက်တွေ့ပါ တစ်ခါတည်း လုပ်ကြည့်ရအောင်လို့လေ ‘ဆိုတော့ “အာကိုကြီးကလည်း ခုနက ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ’ တဲ့ “အင်းပါ ကိုကြီး ပြောပြမယ် လုပ်ပြမယ်’ ဆိုပြီး သူနားကိုတိုးကာ သူနှုတ်ကို အပီအပြင်စုတ်လိုက်တော့ သည် အချိန်မှာသူကလည်း အလိုက်သင့်လေးပြန်စုတ်ပေးနေတယ် “ပြွန်………ပြွန်…’နဲ့ပေါ့ စစုတ်ခါစဆိုတော့ အသံတေပါထွက်နေ တယ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့လက်ကလေးကို ကိုယ့်လီးရှိရာကို အသာပို့ပေးလိုက်တယ် ကိုယ်ကလည်း သူ့ရဲ့ ဖွံဖြိုးနေတဲ့ နို့အုံတေ ကို ချေပေးနေတယ် သူကလည်း ကိုယ့်လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ် လီးတော်တော်တောင်လာတော့ သူက စုတ်နေတာကိုရပ်ပြီး ‘ ကိုကြီး နွယ်လီးစုတ်ကြည့်ချင်တယ်’ တဲ့ အတော့ ကိုယ်လည်းဘယ်ပြောကောင်းမလဲ အစုတ်ခံချင်နေတာကြာပြီဆိုတော့ “အင်း နွယ်စုတ်ချင်စုတ်လေ ‘ဆိုပြီး ပုဆိုးကိုချွတ်ချပေးလိုက် အကြံနဲ့ဆိုတော့ ဘာမှ ဝတ်မလာဘူးလေ နွယ်က ” ကိုကြီးလီးကြီးက အကြီးကြီးပဲနော် ‘တဲ့ “နွယ်မြင်ဖူးတာပဲလေအတိုင်းပါပဲ’ လို့ ပြောတော့ “နွယ်ဘယ်တုံးကမြင်ဖူးလို့လဲ ‘ “ဟို မိုးရွာတဲ့နေက ဇရပ် မှာနားတော့ ကိုကြီး သေးပေါက်နေတုံး နွယ် နောက်ကနေကြည့်နေတာကိုကြီးသိတာကိုး’ဆိုတော့ “ဟင် ကိုကြီးသိတယ်ပေါ့ အဒါ များ ကိုကြီးကလည်းအတည်းကမပြောဘူး နွယ်မှာ တော့ အတည်းက အလိုးခံချင်လို့ သူလီးကြီးကိုမှန်းပြီး ညတိုင်းအိပ်ယာတည်း မှာ ကိုယ့်ဟာကိုပြန်လိုးနေရတာ ဟင့် အကျင့်ကိုမကောင်းဘူး’ ပါးစပ်ကသာပြောနေတာ လက်ကတော့ အမှန်ကန်ကို ထုပေးနေ တာဗျ ကိုယ်ကလည်း သူ့နို့အုံတွေကို သေချာကို စုတ်နယ် ဖိချေပေးနေတော့ သူကလည်း အရသာရှိနေတာ “အမှန်တော့ကိုကြီး လည်း နွယ်ကိုပဲ မှန်းပြီးထုနေရတာ”
“နွယ်လည်း ကိုကြီးအလိုးခံချင်နေတာကြာပေါ့ ‘ ‘အဆိုလည်း အခုလိုးရအောင်လေကွာ လူကြီးတေပြန်မလာခင်’ ‘ အင်း ‘တဲ့ဆို တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို စလိုးတော့တာပဲ ” အင်း……….အား…………အား………… အားးး………..နာတယ် ကိုကြီး မြန်မြန် စောင့်………..အား………..အားသကုန်သာစောင့်လိုးကိုကြီးအား……..အား……….အား……..’ ကိုကလည်း လိုးချင်နေတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ အားရပါးရကို လိုးနေတော့တာပဲ နှစ်ယောက်စလုံးက လီးနဲ့ စပ်ပတ်နဲ့ အပြင်မှာ လက်တွေ့က ပထမဆုံးလိုးဖူးတာဆိုတော့ သိပ်မကြာလိုက်ခနနေတော့ သူလည်း ခါးလေးကော့လားပြီ အင့်…အင်….အား…ဆိုပြီးသွားတယ် ကိုယ်လည်ပြီးးသွားတယ် အလိုနဲ့ပဲ လစ်ရင်လစ်သလိုမကြာ ခန နွယ်နဲ့ လိုးဖစ်သွားတယ်….
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဘေးအိမျက အကိတျမလေး